China Factory Price Low Voltage Cable Distribution Box Supplier-shengte emepụta na suppliers |Shengte
Ọnụ ahịa ụlọ ọrụ dị ala nkesa eriri eriri igwe na-ebunye-shengte
Usoro nke ndị na-ekesa eriri eletrik dị ala na-eji ugboro 50/60HZ, nke a na-egosi voltaji 380V (660V) usoro ike dị ka ikesa ike na njikwa nke ike, ọkụ na nkesa ngwá ọrụ.
Ọ dị mma maka ebe ọha na eze dị n'èzí dị ka ebe dị iche iche siri ike, ebe a na-ekesa transformer, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ebe a na-egwuputa ihe na okporo ụzọ obodo, ogige ubi, ụlọ elu, ọdụ ụgbọ elu na ihe ndị ọzọ.
Ọ kachasị mma maka iji ya na ụlọ ọrụ nwere gas na-emebi emebi dị ka mmanụ ala na ụlọ ọrụ kemịkalụ, yana n'ebe nnukwu nnu nnu dị ka mpaghara mmiri na agwaetiti.
A. The igbe akụrụngwa na-mere nke n'ụzọ zuru ezu mkpuchi mkpuchi polymer composite ihe (SCM) site elu okpomọkụ transverse ịpị.A na-ejikọta igbe ahụ dum site na mgbanaka nke akụkụ ọ bụla na-arụ ọrụ ma nwee oke nrụpụta nrụpụta.Ọdịdị ya bụ akwụkwọ ọhụrụ, kọmpat ma dị mfe ikpokọta.Ma ọ nwere njirimara pụrụ iche nke imepụta mmiri ozuzo na imepụta ikuku.
B. The kabinet nwere magburu onwe eletrik arụ ọrụ.Ndekọ mkpuchi mkpuchi, ike dielectric, ndenye akara nguzogide ntapu na ndenye mgbochi ịka nká dị oke mma.O siri ike ka condensation na-apụta ọbụna n'ebe dị oke mmiri na ebe siri ike.
C. Ma ọ nwere ike n'ibu ike.Site na arụmọrụ nchekwa na-enweghị atụ nke igbe ígwè, ọ bụrụgodị na eriri dị n'ime igbe ahụ mebiri ma ọ bụ mebie ya site na mmetụta ike mpụga, ọ gaghị eme ka a na-ebubo igbe ahụ, karịsịa maka ebe ndị mmadụ bi na-enweghị ihe nchebe.
D. A na-akpụzi akụkụ ahụ dum nke igbe ahụ ma gbakọta ya site na mgbidi ụlọ, n'ihi ya, ọ nwere oke akụkụ ziri ezi na ntinye dị mma.
E. Ọrụ mkpuchi dị mma.The kabinet ahụ bụ n'ụzọ zuru ezu mkpuchi mkpuchi, na-enweghị na-agbakwụnye magburu onwe mkpuchi mkpuchi arụmọrụ nke grounding usoro ihe onwe ya na pụrụ iche ventilashion Ọdịdị imewe, ọ pụrụ n'ụzọ dị irè gbochie ohere nke condensation na ntu oyi na kabinet ahụ.
F. Magburu onwe chemical corrosion eguzogide na arụmọrụ, nwere ike n'ụzọ dị irè iguzogide adịghị ike acid, adịghị ike alkali, nnu ịgba, mmiri ozuzo corrosion.
G. Nguzogide ịka nká dị mma.Ịgbakwunye ihe mgbochi ultraviolet na ihe ahụ na-eme ka igbe ahụ dịkwuo ogologo ma nwee ogologo ndụ ọrụ.
H. Ihe ejikọtara ọnụ nke ọma nwere imepụta mmiri ozuzo pụrụ iche, ọkwa nchebe ruo IP44 ma ọ bụ ọbụna IP54.
I. Ihe ndị dị n'ime ime ọgaranya na-eme ka ntinye nke eletriki eletrik dị mfe, dị mfe, ịdị arọ dị arọ, ike dị elu, nnukwu okpomọkụ na-eguzogide ọkụ na ọkụ ọkụ, ihe owuwu n'ozuzu ya kwụsiri ike, nchekwa na ntụkwasị obi.
J. Kọmpat Ọdịdị, ọmarịcha imewe na agba eke, kwekọrọ na nke mara mma, enweghị mmetọ ọkụ.
Nọmba usoro n'usoro Aha Ụlọ ọrụ ọkọlọtọ uru Arụmọrụ na egosi Ụkpụrụ ule
1 njupụta g/cm2 1.75 ruo 1.95 1.84 GB1033
2 Ntinye mmiri mg ≤20 18.3 GB1034
3 Okpomọkụ dị n'elu okpomọkụ Celsius C 240 240 GB1035
4 Ike mmetụta Charpy KJ/m2 ≥ 90 124 GB1043
5 ekwe ike Mpa ≥ 170 210 GB1042
6 Mgbochi mkpuchi (nke nkịtị) Ω ≥ 1.0 × 1033 3.0 × 1013 GB1410
7 Nguzogide mkpuchi (mikpu 24h) Ω ≥ 1.0 × 1012 5.3 × 1012 GB1410
8 Ike Dielectric Frequency Power MV/m ≥ 12.0 17.1 JB7770
9 Ihe na-akpata ọnwụ dielectric (1MHz) -- ≤ 0.015 0.013 GB1409
10 Dielectric mgbe niile (1MHz) -- ≤4.5 4.2 GB1409
11 Igwe ọkụ eletrik s ≥ 180 190 GB1411
12 Ndekọ akara ntọhapụ (PTI) v ≥ 600 600 GB4027
13 Ịkwụsị ire ọkụ klas FVO FVO JB7770
14 Anwụrụ ọkụ nsi klas Ⅱ Ⅱ JB7770
15 Njupụta anwụrụ ọkụ klas Ⅱ Ⅲ JB7770
Nọmba usoro n'usoro Ihe oru ngo Ụlọ ọrụ oru oke
1 Ugboro ugboro Hz 50/60
2 Egosiri voltaji arụ ọrụ V AC 380/660
3 Enyere voltaji mkpuchi V AC 690/800
4 Enyere ugbu a A ≤ 630
6 Enyere ogo kacha elu enwere ike ịnabata ugbu a Ka 100
7 1 min ugboro ike na-eguzogide voltaji V 2500
8 Ike imebi Ka 100
9 Ọkwa nchebe -- IP44
10 Klas nke mmetọ -- Ⅱ
Nke gara aga: akọrọ-ụdị transformer
Osote: Ụlọ ọrụ ODM 10KV/11KV klaasị S11/S13 usoro ihe ngbanwe mmanụ na-emikpu n'ụzọ zuru oke ngbanwe ike ntụgharị-shengte
Ọnụ ahịa kacha mma DFW-12 Cable Branch Box Supplier-she...